ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအရူးအမူးချစ်မိတာကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်း !!!!!
ကြာ 23 Jul 2020, 14:50 ညနေ
လေလည်မိတဲ့အာဃာတကြောင့် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ စစ်သည်တော် !!!
ဆာမူရိုင်း၏လက်နက်သည် ဓားမဟုတ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ??
ရှိုးဂန်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ညများ
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာ အိမ်မက်ထဲကလို မဟုတ်ဘူး ！！
ရေထဲခုန်ချသွားတဲ့အမျိုးသမီးကို ဆူမိုကစားသမားအယောက် ၂၀ ကသွားရောက်ကယ်ဆယ် !!!
Work from home ရင်းအရက်သမားဖြစ်သွားရသူ!!!
ဂျပန်မှာ စစ်ပွဲတွေ မပျောက်ကွယ်သေး
Toilet ထဲမှာ ယောက်ျားလေးသီးသန့်သာဆော့နိုင်တဲ့ဂိမ်းကို တီထွင်မိသောအခါ ?